Yemen: Olona miisa 16 maty tamin’ny fanafihana ny Masoivoho Amerikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2021 17:32 GMT
Nanoratra i Carpetblogger, Amerikana monina any Torkia saingy mandeha tany Yemen, hoe:
Nipetraka tao amin'ny efitrano malalaky ny hotely Burj al Salam izahay ora iray izay, no naheno fipoahana roa, saingy tsy taitra firy izahay. Tena akaiky izany satria nihozongozona kely ny varavarankely. Tokony ho 30 minitra taty aoriana dia nanomboka nisy ny tatitra fa notafihana ny masoivohon'i Etazonia. Nilaza ny tatitra tamin'ny fahitalavitra Yemenita fa nisy ny fiara voasesika baomba narahina fitifirana. Voalaza fa nisy ny naratra. Nilaza ny tatitra fa ny Al Qaeda no nanao ny fanafihana, izay nanjary navitrika hatrany tao amin'ny firenena. Eo akaikin'ny hotely Sheraton no misy ny masoivoho Amerikana. Nanamarina ny tatitra fa ny Masoivoho io fa tsy ny faritra manodidina azy.
Hoy ny tatitra manaraka nataony :
Nitatitra ny vaovao any an-toerana fa notaterina tamin'ny angidimby ny olona tao amin'ny masoivoho. Vao nahita angidimby nandeha nankany aho. Manana sary fa tsy manam-potoana handefasana azy.
Amerikana iray avy any Arabia Saodita, Stilettos in the Sand nanaisotra an'i Yemen tao anaty lisitry ny ‘toerana fialantsasatra tsara handehanana’ taorian'ny fanafihana. Nanoratra izy:
Not that we were considering heading to Yemen in the near future, but… This means that for SURE we won't be considering Yemen as a vacation destination. Ever. It is not the first time this year that the Westerners have been targeted. And, after reading this article in Gulfnews, I just think it would be best for us to consider other more inviting countries to head to for short vacations.
Tsy hoe mieritreritra ny handeha any Yemen akory izahay atsy ho atsy, fa … midika izao fa AZO ANTOKA ny tsy iheverantsika an'i Yemen ho toy ny toerana hanaovana fialan-tsasatra. Tsy vao sambany tamin'ity taona ity no lasibatra ny Tandrefana. Ary, taorian'ny namakiako ity lahatsoratra ity tao amin'ny Gulfnews, mieritreritra aho fa tsara kokoa ho antsika ny mijery firenena hafa hanaovana fialan-tsasatra fohy.
Manan-kolazaina momba ny fanafihana bebe kokoa eto i Jane Novak, mpanoratra ao amin'ny Armies of Liberation. Nanampy izy hoe:
Marihina fa i Yemen no tanindrazan'i Osama bin Laden ary lasibatra tamin'ny fanafihana ny Masoivoho Amerikana taloha […]
Tamin'ny volana lasa teo ny fotoana farany nandrenesanay momba ny Jihad Islamika Yemenita rehefa nilaza izy ireo fa nanatanteraka ny fanaovana vy very ny aina tamin'ny fanapoahana ny fiara voasesika baomba tao Hadramout, ary nandrahona ny hanafika ao an-drenivohitra amin'ny manaraka.
Nitanisa ireo fanaovana vy very ny aina tamin'ny fanapoahana fiara voasesika baomba nitranga teo aloha tao amin'ny firenena ihany koa i Novak, izay mitantara momba an'i Yemen ao amin'ny bilaoginy:
Volana Septambra 2006, andiam-panafihana tamin'ny toerana fitehirizana solika ao Marib sy Hadramout
Volana Jolay 2007, fiara voasesika baomba tao amin'ny toeram-pizahantany tany Marib nahafatesana mpizahatany Espaniola miisa valo
Volana Jolay 2008, fiara voasesika baomba tao amin'ny tobin'ny polisy tany Sayoun Hadrmaout, iray maty ary 18 naratra
Tany am-piandohan'ny taona 2008 dia nisy ny fanafihana tamin'ny bala-tafondro tao Sana'a namelezana ireo tandrefana, ao anatin'izany ny masoivoho Amerikana, ny masoivoho Italiana ary ny trano fonenana natokana ho an'ny tandrefana. Taorian'ny fanaovana vy very ny aina tamin'ny fanapoahana baomba tamin'ny volana Jolay 2008, maty ny polisy iray ary miisa 18 ny olona naratra tany Sayoun tany amin'ny faritany atsimo atsinanan'i Hadramout. Miisa dimampolo ireo milisy noahiahiana ka nosamborin'ny manampahefana, ao anatin'izany ny mpitarika ny AAIA Khalid Abdul Nabi sy ny Saodiana Muhammad bin Nayif al-Qahtani. Taorian'ny fisamborana dia nanambara i Yemen fa nanakana ny fanafihana tany Arabia Saodita nikendry ny indostrian'ny solika izy ireo. Raha mila tantara sy fandalinana momba ny al-Qaeda any Yemen dia zahao ny sokajim-bilaogy al-Qaeda.